राष्ट्रपति निर्वाचनको मतगणना सुरु, कस्तो छ प्रारम्भिक परिणाम ? — Imandarmedia.com
राष्ट्रपति निर्वाचनको मतगणना सुरु, कस्तो छ प्रारम्भिक परिणाम ?
राष्ट्रपति निर्वाचनको मतगणना सुुरु भएको छ । संघीय संसद नयाँ वानेश्वरमा राखिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नै मतगणना सुरु गरिएको हो । मंगलबार दिउँसो ४ बजेपछि सुरु भएकोमतगणनाकाे प्रारम्भिक परिणाम सार्वजनिक गरिएको छैन ।
भण्डारीलाई नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलको समर्थन छ भने राईलाई कांग्रेसको समर्थन छ ।
प्रतिनिधिसभाका बाबुराम भट्टराई, प्रेम सुवाल तथा राष्ट्रियसभाका जितेन्द्र देव र रमेश यादवले मतदान गरेनन् । प्रदेशसभाका १४ सदस्यले पनि मतदान गरेनन् । राष्ट्रपतिका लागि वर्तमान राष्ट्रप